'Indlu Yomqeqeshi' E-Lochiel - I-Airbnb
'Indlu Yomqeqeshi' E-Lochiel
Kurrajong Heights, New South Wales, i-Australia
Igumbi e-i-bed and breakfast ibungazwe ngu-Charlene
I-Coach House iyisibonelo sokunethezeka okukhululekile kanye nobuhle bendlu yasepulazini kulabo abafuna ukubaleka kwangasese. Ukuphunyuka okuzolile okubekwe ngaphansi kwezintaba zeBlue Mountains, ikotishi liwuhambo olulula lwemizuzu engama-60 ukusuka e-Sydney.
Ngokulingana okuphelele kokusondelana, ubumfihlo kanye nesevisi yomuntu siqu, okuhlangenwe nakho kule ndawo engcwele emangalisayo akulula futhi akunakulibaleka.
Susa ingcindezi nge-masseuse yethu eqeqeshwe endlini, noma ujabulele i-champagne engadini yasekhishini phakathi kwama-chook.
Itholakala endaweni yasemaphandleni emangalisa kakhulu ye-Kurrajong Heights, le ndlu yomqeqeshi ebukekayo iyindawo ekahle yokubaleka yezithandani okuyihora nje ukusuka enkabeni ye-Sydney. Ingxenye ye-c1825 Lochiel House estate, i-Coach House iyakwamukela ngendawo engaphambili yophahla lukathayela ejabulisayo, ikumema ukuthi ungene emnyango wesicabha saseFrance futhi ungene endaweni yokubalekela yangasese, umhlaba oqhelelene nokuphila kwansuku zonke kokusebenza. Ingaphakathi libonisa imishayo yezingodo kanye nophahla lwesonto lombhishobhi ngaphezu kombhede, nendawo yokuhlala, ikhishi lemabula elingaphezulu negumbi lokugezela elihle elihlinzeka ngakho konke ukunethezeka ozokudinga. Phuma ngaphandle uye egcekeni eliphumulele futhi uhlale phakathi kwezingadi ezichumayo notshani obuluhlaza obunompheme ovulekile ovulekile we-dome gazebo njengendawo yawo ephakathi. Ukuthuthukisa ukuhlala kwakho kuyindawo yokudlela esezingeni eliphezulu enikezela ngesidlo sasemini nesidlo sakusihlwa se-A La Carte, ama-cocktails nabasebenzi abakhethekile abazimisele kakhulu ukuncoma uhla lwezindawo eziheha amasiko nezokupheka ezidumile kuso sonke isifunda.
Sicela uqaphele indawo yokudlela yase-Lochiel House isebenza ngoLwesine-ngeSonto. Ngaphandle kwalezi zinsuku unekhishi lakho lesimanje ngaphakathi kwe-The Coach House.
Ngokulingana okuphelele kokusondelana, ubumfihlo kanye nesevisi yomuntu siqu, okuhlangenwe nakho kule ndawo engcwele emangalisayo akulula futhi akun…
ubusuku obungu-7 e- Kurrajong Heights
4.67 (izibuyekezo ezingu-39)
'Indlu yomqeqeshi' isendaweni ephansi yezintaba ezimangalisayo zeBlue Mountains.
Izinto ezikhangayo zasendaweni zihlanganisa indawo emaphakathi yama-apula e-Bilpin ezansi nje nomgwaqo lapho ungajabulela khona ama-apula 'okuzikhethela owakho', amashedi e-boutique cider kanye nophaya wama-apula ongcono kakhulu owake waba nawo! Ungathola nokuhamba kahle kwehlathi ukuya ezimpophomeni kanye nama-loookouts amangalisayo.
Ngamahora okusebenza endaweni yokudlela, abasebenzi bazokwazi ukusiza nganoma yimiphi imibuzo.
Inombolo yepholisi: PID-STRA-12920
Hlola ezinye izinketho ezise- Kurrajong Heights namaphethelo